Mootummoota Gamtooman - BBC News Afaan Oromoo
...tti maxxanfame 5:36 18 Fuulbaana 20215:36 18 Fuulbaana 2021
Namootni ijaan argan baay'een Dr Tewdroos Tafarraa, hakiima lammii Itoophiyaa lola naannoo Tigiraay baqatee Sudaan jiru dabalatee reeffi kun bakka miidhamtootni naannoo Tigiraay lolli mootummaan Itoophiyaa humnoota TPLF waliin wal waraanu irraa akka dhufe amanu.
...tti maxxanfame 9:34 16 Fuulbaana 20219:34 16 Fuulbaana 2021
Dhaabbati Biyyoota Gamtoomanii(UN) Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan marii waldhibdee dhimma hidha haaromsaa irratti marii akka itti fufanii fi mariin kunis yeroo murtaa'aa keessatti akka gaggeeffamu akeekkachiise.
...tti maxxanfame 9:43 14 Fuulbaana 20219:43 14 Fuulbaana 2021
'Waraanni Itoophiyaa biyyoota Afriikaa hundatti babal'achuuf sodaachiseera' -UN
Waraanni Tigraayitti ji'oota 10 dura eegalee dhiyeenyammoo naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal'ate, biyyoota gaanfa Afrikaa mara gooluuf akka sodaachise, Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Komishinarri Olaantuun Mirgoota Namoomaa Misheel Baashileet Wiixata kaleessaa akeekkachiisan.
...tti maxxanfame 11:22 8 Fuulbaana 202111:22 8 Fuulbaana 2021
UNHCR lakkoofsi baqattoota Sudaan jiranii hir'atus eessa akka galan hin baramne jedhe
Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniitti Komishiniin Dhimma Baqattootaa lakkoofsi baqattoota Itoophiyaa kaampii baqattootaa Sudaan jiranii hir'atus eessa akka galan hin baramne jedhe.
...tti maxxanfame 12:12 7 Fuulbaana 202112:12 7 Fuulbaana 2021
'Fandiin dabalataa dhibnaan deeggarsa namoota miliyoona afuriif Kaaba Itoophiyaatti goonu adda kutna' - WFP
Fandii dabalataa hin argannu taanaa deeggarsa nyaataa Kaaba Itoophiyaatti miliyoona afuruuf goonu adda kutuuf dirqamna jedhe Sagantaan Nyaata Adunyaa.
...tti maxxanfame 6:45 3 Fuulbaana 20216:45 3 Fuulbaana 2021
UNtti ambaasaaddarri US bakka bu'aa AU Gaanfa Afriikaa waliin mari'atan
Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Ambaasaaddarri Ameerikaa Liindaa Toomaas Giriinfiild Gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa Gamtaa Afriikaa kan ta'an Pirezidaantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasaanjoo waliin bilbilaan dubbachuu ibsan.
...tti maxxanfame 10:18 27 Hagayya 202110:18 27 Hagayya 2021
Dhaabbata mootummoota Gamtoomaaniitti Manni Maree Dhimma Nageenyaa, Itoophiyaatti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchisee kaleessa Hagayya 26,2021 marii gaggeessera.
...tti maxxanfame 8:58 11 Hagayya 20218:58 11 Hagayya 2021
UN Tigraayitti kaampii baqattoota Ertiraa lama qaqqabuu danda'uu hime
Ejensiin baqattootaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii - UNHCR, naannoo Tigrayitti kaampiiwwan lama baqattoonni Ertiraa keessatti dahatan irra deebiin qaqqabuu danda'uu hime.
...tti maxxanfame 15:36 4 Hagayya 202115:36 4 Hagayya 2021
Qindeessaan deeggarsa namoomaa UN daawwannaa Itoophiyaa booda maal jedhan?
Maartiin Giriifiz guyyoota lamaaf Tigiraayi wayita daawwatan haalli rakkoo namoomaa baayyee hamaan jiraachuu ijaan argu eeraniiru.
...tti maxxanfame 6:04 31 Adooleessa 20216:04 31 Adooleessa 2021
Balaliinsi deeggarsa namoomaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii (UN) jalqabaa Finfinneerraa gara Maqaleetti taasifameen hojjattoonni kiyya qoricha barbaachisaa ta'e akka hin fudhanneef dhorkamu UNtti Waajjirri Qindeessaa Dhimmoota Namoomaa (UNOCHA)n beeksiise.